လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်တော့မယ့် လူတိုင်းအတွက် လေကျွင်းပြောတဲ့ ဂရုပြုစရာအချက်များ | Phoe Phyu & Associates
HomeBlogsPhoe Phyu's blogလုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်တော့မယ့် လူတိုင်းအတွက် လေကျွင်းပြောတဲ့ ဂရုပြုစရာအချက်များ
Tags: SMEStart Up
Smartphone လောကရဲ့ထိပ်တန်းဖုန်းတွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Xiaomi ကိုလူတော်တော်များများကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Mi,Redmi ဖုန်းတွေကလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေကြားသုံးစွဲသူ သိသိသာသာများလာတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ တရုတ်တွေရဲ့နည်းပညာနယ်ပယ်မှာတော့ အလီဘာဘာတည်ထောင်သူ ဂျက်မားကိုတော့ လူတော်တော်များများ သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ရှောင်းမီရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် လေကျွင်းကိုတော့ လူသိပ်မသိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြီးတော့ SME နဲ့ Start-Up လုပ်ငန်းတွေကို စလုပ်တာဟာ ထင်သလောက် လွယ်ကူလှတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်အောင်မြင်ပြီးသား နာမည်ရပြီးသားလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ရတာထက် ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလို အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သမားရိုးကျလမ်းစဉ်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေတာထက် တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာကို အသုံးချပြီးလုပ်ဆောင်တာက မိတ်ဆွေကို ပိုပြီးမြန်ဆန်တိုးတက်စေမှာပါ။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဒါမှမဟုတ် အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် Xiaomi စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ လေကျွင်းပြောပြထားတဲ့ ဂရုပြုစရာအချက်လေးတွေကို သိထားသင့်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၁. Self Motivation ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စလုပ်မယ်ဆိုရင် ဖိအားကတော့ အနည်းနဲ့ အများရှိလာမှာပါ။ ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ရှိရင် ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဖိအားနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား တွန်းအားပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်းအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်မှာပါ။
၂. Management စီမံခန့်ခွဲမှုကတော့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအရေးပါတဲ့အချက်ပါ။ အချိန်၊ ဝန်ထမ်းနဲ့ ငွေကြေးတွေကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ ဆရာကျနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Management မနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းက လေထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်သလိုပါပဲ။ ကြာကြာ မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး။
၃. Marketing Skill လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လူသိများအောင် လုပ်တော့မယ်ဆို Marketing ပိုင်းကလည်း ဆန်းသစ်နေဖို့ လိုသေးတယ်ဗျ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း (သို့) လုပ်ငန်းက ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်မှာမလား။ အရင်တုန်းက အရပ်ထဲ ပဲပြုတ်ရောင်းသလို "ဟောဒီက ပဲပြုတ်" ဆိုရုံနဲ့ မရတော့တာ စာဖတ်သူတို့လည်းသိကြမှာပါ။ အခုလို ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးထဲကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကူးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Marketing Skill ဆိုတာကလည်းလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ အရေးပါနေပါတယ်။
၄. Creative Ideas ဒီလို တီထွင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလို့လည်း အခုလို စွန့်ဦးတီထွင် ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူးလား။ မဟုတ်ရင် အရင်လို စာအုပ်ဟောင်းကြီးထဲက နည်းစနစ်တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်နေမိတော့မှာပေါ့။ တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုဆိုရင်တော့ သာမာန်လမ်းစဉ်ထဲက ခွဲထွက်ပြီး လောကကြီးကို ဇောက်ထိုးကြည့်တတ်ရမယ်လေ ဒါမှလည်း သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံး သာနေမှာမလား။
၅. Communication Skill ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်း ဒါမဟုတ် လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စလုပ်တော့မယ်ဆို မှန်ကန်တဲ့ Partnership တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်ခြင်းက အောင်မြင်မှုကို ကြာကြာမထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် သင်က သနပ်ခါး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ပဲ ထားပါတော့။ ကျွန်တော်က ကျောက်ပျဉ် ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်း လုပ်တယ်၊ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ Partnership ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၆. Legal Plan အတုတွေ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ ဒီလိုနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတံဆိပ်၊ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်၊ ခွင့်ပြုချက်တွေကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ စပ်တူ အကျိုးစီးပွားရေးတွေက မိမိ ရပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်အောင် အားထုတ် ကြိုးစားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းစီးပွားစာချုပ် စာတမ်းတွေမှာပေါ့။ ပဏာမ ညှိနှိုင်းရတယ်။ သဘောတူညီချက်တွေ ပြင်ဆင်ရတယ်။ စည်းကမ်းချက်တွေ သေချာ ချမှတ်ရပါတယ်။ စာချုပ်တွေဟာ လုပ်ငန်းထူထောင်မှု ပုံစံတွေလည်း ဖြစ်နေလို့ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ ရှေ့နေနဲ့ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီး တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းကနေ သေသေချာချာ လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်တွေ ဘာကြောင့် လိုတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်အခု ပြောပြမယ့် အကြောင်း ဖတ်ပြီးရင် နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။
ရှောင်းမီရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာမယ့် လေကျွင်းကို ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၆ရက်၊ ၁၉၆၉ခုနှစ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူပေပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၇ မှာ အထက်တန်းကျောင်း အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၁မှာတော့ ဝူဟန် ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်တက်ရင်း လေကျွင်းဟာ သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူ Software Company အသေးလေး ထောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားဝင်မဖြစ်သေးတဲ့ လေကျွင်းရဲ့ Company ငယ်လေးဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မလည်ပတ်နိုင်တော့ပဲ ၆လတည်းနဲ့ အရှုံးခံပြီးပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လေကျွင်းရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက ဆင်တူကူးယူပြီး ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းချလိုက်တာကြောင့်ပါ။ ဒါနဲ့တင် လက်လျှော့လိုက်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၉၂ခုနှစ်မှာ Kingsoft လို့ခေါ်တဲ့ Anti Virus Software ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အောက်ခြေသိမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး ၂နှစ်အတွင်းမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာ ရာထူး ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၄နှစ် အကြာမှာတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ Kingsoft မှာတာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ရင်း Joyo.com ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းစာအုပ်ဆိုင်တစ်ခု ထူထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Joyo ကို ဒေါ်လာ ၇၅သန်းနဲ့ Amazon ကိုရောင်းချခဲ့ပြီး ဘီလျံနာတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Kingsoftဟာ လေကျွင်းကို ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ ဥက္ကဌရာထူး ထပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု ထူထောင်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ လေကျွင်းကလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ဥက္ကဌရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ လေကျွင်းဟာ သူ့မှာရှိတဲ့ငွေတွေကို Mobile Internet Company ဖြစ်တဲ့ UCWeb နဲ့ Vancl.com မှာရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ UCWeb ရဲ့ ဥက္ကဌရာထူး အနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ သူက Kingsoft မှာလုပ်တည်းက Nokia နဲ့ Motorola တို့နဲ့လုပ်ငန်းသဘောအရ ပတ်သတ်ခဲ့ရတာကြောင့် ထိုစဉ်ကတည်းက မိုဘိုင်းဖုန်းလောကကို ထိုးဖောက်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့နောက်မှာတော့ သူစိတ်ကူးအိမ်မက်အတိုင်း စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဈေးကွက်ထဲကို ခြေချဖို့ မဟာဗျူဟာတွေ ချမှတ်တော့တာပါပဲ။ ၂၀၁၀ အစောပိုင်းလောက်မှာ သူငယ်ချင်း ၈ယောက်စုပြီး စမတ်ဖုန်းလောကမှာ ရှောင်းမီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ နေရာဝင်ယူလာပါပြီ။ ရှောင်းမီကို တည်ထောင်ပြီး ၁နှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Mi1 ကိုစထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Mi1 ကို Steve Jobs ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ရာ IPhone 4S နဲ့အပြိုင် တရုတ်ဈေးကွက်ထဲကို စသွင်းတယ်။ IPhone 4S က $800 ဝင်းကျင်နဲ့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ IPhone နဲ့အရည်အသွေးတူတဲ့ Mi1 ကို တဝက်ဈေးပဲပေးပါဆိုပြီး စမတ်ဖုန်းလောကတစ်ခုလုံးကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါသေးတယ်။ Steve Jobs ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့ လေကျွင်းကို ဒုတိယ Steve Jobs အဖြစ် တင်စားကြပါတယ်။
၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၄၅ ဘီလီယံလောက်ကို ဖြစ်နေပါပြီ။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ လေကျွင်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုက ၉.၉ဘီလီယံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် ၈ ဘီလျံနာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နာမည်ကြီး Forbes Magazine ရဲ့ တနှစ်တာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို အောင်မြင်ဖို့အတွက် လေကျွင်းဟာ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်အောင် ဗျူဟာတွေချခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့ ရှောင်းမီက တခြားဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင် ကုန်စရိတ်လျော့ချတဲ့အနေနဲ့ နေရာကောင်းမှာ ဆိုင်ခန်းဖွင့်မယ့်အစား Online မှာသာ ရောင်းချခဲ့တာပါ။ ကြော်ငြာတာကိုလည်း Online ကနေသာကြော်ငြာပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြိုင်ဘက်တွေထက် အဆပေါင်းများစွာ လျော့လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဈေးကွက်ထဲမှာ အမြဲလိုအပ်နေအောင် ဖုန်းတွေကို အရေအတွက် ထိန်းချုပ်ပြီးထုတ်ခဲ့တယ်။ Customer Feedback တွေကို အပတ်စဉ် ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ ဈေးကွက်ရွေးချယ်ရာမှာလည်း ဥရောပ၊ အမေရိကန်စတဲ့ ဈေးကွက်တွေကို မရွေးချယ်ပဲ ဈေးပေါပြီး အရည်အသွေး ကောင်းလိုအပ်နေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဈေးကွက်ကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့် ရှောင်းမီဟာ တဟုန်ထိုး အောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လေကျွင်းဟာ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးသက်သာရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုဦးတည်ရင်း Xiaomi ကိုကမ္ဘာ့ စမတ်ဖုန်းလောကမှာ Top 10 ဝင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။
ဒီလိုပါပဲ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့လည်း အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကလည်း အရင်ဆုံး ကိုယ့်လုပ်ငန်းက တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဥပဒေအရ အကျိုးခံစားခွင့်တွေရမှာ ဖြစ်သလို ဝိသမလောဘသားတွေရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခံရမယ့် ဒဏ်တွေကနေ ရှောင်ရှားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဖိုးဖြူ နှင့် ရောင်းရင်းများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိုးဖြူနှင့် ရောင်းရင်းများ ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းမှာလည်း မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဥပဒေအရ အကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့၊ လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့၊ တန်းတူ စီးပွားရှာခွင့်ရရှိစေဖို့ တာဝန်ယူ အကျိုးဆောင်ပေးလျှက် ရှိပါတယ်။